समाचार - एक मेकअप प्रगति कसरी समाप्त गर्ने
मेकअप को मामला मा, आफ्नो अनुहार acing व्यवसाय को पहिलो आदेश हुनु पर्छ आफ्नो ओठ मेकअप र आँखा मेकअप मा अघि बढ्नु अघि। तर चीजहरू जटिल हुन सक्छन्। के तपाईंलाई वास्तवमै प्राइमर चाहिन्छ? के कन्सीलर फाउन्डेशन अघि वा पछि आउँछ? हामी यहाँ छौं अनुहारको मेकअप लागू गर्न सुरु देखि समाप्त सम्मको चरण-देखि-चरण गाईडको साथ समीकरण बाहिर अनुमान गर्न। तपाईंको सन्दर्भको लागि मेकअपको लागि सुझावहरू:
चरण १: PRIMER
जब तपाइँ मेकअप लागू गर्न आउँदछ प्रिमरको प्रयोग गर्नु भनेको तपाइँले गर्न सक्ने उत्तम चीजहरू मध्ये एक हो। प्राइमरले तपाईंको मेकअपलाई दिनभरि समान रूपमा लगाउन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं सुक्खा छाला वा म्याट फिनिशको साथ प्राइमर छ भने तपाईं चमकदार फिनिशको साथ प्राइमर छनौट गर्नुहोस्। जस्तोसुकै प्राइमर छान्नुहोस्, तपाईंको छालामा वा लक्षित क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस्, तपाईंको छालाको विशिष्ट चिन्ताहरूमा निर्भर गर्दछ।
चरण २: COLOR CORRECT CONCEALER
आँखा मुनि कालो घेरा छ वा रातो रातो लुकाउनको लागि? अब यो कभर गर्न को लागी एक र correct्ग सही गर्ने कन्सिलर प्रयोग गर्ने समय हो। केवल आफ्नो औंलाको प्रयोग गरी लक्षित क्षेत्रहरूमा र color्ग-सुधार गर्ने कन्सिलरको एक सानो मात्रामा मिश्रण गर्नुहोस्।
STEP 3: फाउन्डेशन
तपाइँको अनुहार अलि आधार बिना पूरा हुनेछैन! त्यहाँ धेरै धेरै प्रकारका फाउन्डेसनहरू छन् बाहिर, त्यसैले एक छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको आवश्यकता अनुसार मिल्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं तेल छाला छ भने, तपाईं एक मैट को उपयोग गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ (उर्फ गैर चमकदार) पूर्ण आधार। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं सुक्खा छाला, एक उज्ज्वल समाप्त आधार, तपाईं को लागी एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
STEP 4: BRONZER, ब्लश, र / वा हाइलाइटर
अर्को अप: तपाईंको चमकमा नक्कल गर्नुहोस् वा नक्कली गुलाबी टोनमा थोरै ब्रोन्जर, ब्लस र हाइलाइटर लागू गर्नुहोस्। जहाँसम्म ब्रान्जर र हाइलाइटर जानुहोस्, तिनीहरूलाई त्यस्ता ठाउँमा राख्नुहोस् जहाँ सूर्यले तपाईंको अनुहार स्वाभाविक रूपमा हिर्काउँछ (तपाईंको निधार, नाक, गाला, र हनुरो)।